သားဥအိမ်တွင် ရေအိတ်ဖြစ်ခြင်း | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ သားအိမ်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာ သားဥအိမ်နှစ်လုံးရှိပါတယ်။ မျိုးဆက်ပွားနိုင်တဲ့ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ သားဥအိမ်က မမျိုးဥထုတ်ပေးပြီးတော့ ရင့်မှည့်လာတဲ့မမျိုးဥတွေက လစဉ်ဓမ္မတာလာတဲ့အခါမှာ ကြွေကျသွားပါတယ်။
သားဥအိမ်အတွင်းမှာ (သို့) သားဥအိမ်နံရံမှာ အရည်အိတ်လေးဖြစ်လာတာကို သားဥအိမ် မှာရေအိတ်ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးအများစုမှာ ရေအိတ်တွေရှိတတ်ပါတယ်။ ရေအိတ် အများစုက ရောဂါလက္ခဏာမပြသလို အန္တရာယ်လည်းမရှိပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ကုသမှုခံယူစရာမလိုဘဲ လအနည်းငယ်အတွင်းမှာ သူ့အလိုလိုပျောက်ကင်းသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတလေမှာ ရေအိတ်ပေါက်ထွက်သွားရင် ပြင်းထန်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေပြတတ်ပါတယ်။ ကာကွယ်နိုင်မယ့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သိထားပြီး ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အများစုက ရောဂါလက္ခဏာမပြဘဲ သူ့အလိုလိုပြန်ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ ရေအိတ်ကြီး ရင်တော့ အောက်ပါရောဂါလက္ခဏာတွေ ပြတတ်ပါတယ်။
- ဗိုက်အောက်ပိုင်းအောင့်ခြင်း၊ နောက်ကျောနဲ့ ပေါင်တွေပါ နာတတ်ပါတယ်။
- ရာသီမလာမီ (သို့) ရာသီပြီးခါနီး အချိန်များတွင် ဗိုက်အောင့်ခြင်း
- လိင်ဆက်ဆံစဉ် ဗိုက်အောင့်ခြင်း
- ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ရင်သားများနာကျင်ခြင်း (ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကြုံတွေ့ရတတ်သော လက္ခဏာများကဲ့သို့)
- ရေအိတ်ကဆီးအိမ်ကိုဖိမိခြင်းကြောင့် ဆီးမကြာခဏသွားချင်ခြင်း၊ ဆီးကျန်သလိုခံစားရခြင်း
အများစုက ရာသီစက်ဝန်းရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်အရ ရေအိတ်ဖြစ်လာလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကိုတော့ Functional cyst လို့ခေါ်ပါတယ်။
Functional Cyst နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။
ရာသီစက်ဝန်းရဲ့အလယ်လောက်မှာ follicle ပေါက်ကွဲပြီး အထဲက မမျိုးဥထွက်လာပါတယ်။ မမျိုးဥက သားဥပြွန်တစ်လျှောက်ဆင်းသွားပြီး သုတ်ပိုးနဲ့တွေ့ကာ သန္ဓေအောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ခုကြောင့်ပုံမှန်အတိုင်း follicle မပေါက်ကွဲဘဲ ဆက်ကြီးထွားလာပြီး ရေအိတ်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
Follicle ထဲက မမျိုးဥထွက်လာပြီးချိန်မှာ သန္ဓေတည်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ အီစရိုဂျင်နဲ့ ပရိုဂျက်စတုန်း ဟော်မုန်းတွေ အများကြီးထုတ်ပေးပါတယ်။ ဒါကို corpus luteum လို့ခေါ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ မမျိုးဥထွက်သွားတဲ့အပေါက်က ပိတ်သွားပြီးတော့ follicle ထဲမှာ အရည်တွေပိတ်ပြီး ရေအိတ်အနေနဲ့ကြီးထွားလာပါတယ်။
Functional cyst တွေက နာကျင်ခြင်းမရှိ၊ အန္တရာယ်မပေးဘဲ ရာသီစက်ဝန်း2ခါ3ခါလောက်အတွင်း သူ့အလိုလိုပြန်ပျောက် သွားတတ်ပါတယ်။
Dermoid cyst - ဆံပင်၊ အရေပြား၊ သွား စတဲ့တစ်သျှူးအပိုင်းအစလေးတွေပါဝင်ပါတယ်။ ကင်ဆာဖြစ်ခဲပါတယ်။
Cystadenomas - သားဥအိမ်တစ်သျှူးတွေကနေဖြစ်လာပြီးတော့ အရည်ကျဲကျဲ (သို့) အချွဲရည်တွေပါဝင်ပါတယ်။
Endometriomas - သားအိမ်ဆဲလ်တွေပြင်ပကို ပျံ့နှံ့ကြီးထွားလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အိတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Dermoid cyst နဲ့ Cystadenomas တွေက ကြီးထွားလာတတ်ပြီး သားဥအိမ်ကို သူ့ရဲ့မူလနေရာကနေ တွန်းထုတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအခါ သားဥအိမ်လိမ်သွားနိုင်ပြီး ဗိုက်အောင့်စေနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးအချို့မှာ ရောဂါလက္ခဏာပြသခြင်းမရှိဘဲ စမ်းသပ်စစ်ဆေးကြည့်မှသာ ရေအိတ် ကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ သွေးဆုံးပြီးချိန်မှ ဗိုက်မှာအလုံးတွေ့ရင်တော့ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုခံယူဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
1. သားဥအိမ်လိမ်သွားခြင်း - ရေအိတ်က အရမ်းကြီးလာတဲ့အခါမှာ သားဥအိမ်က မူလနေရာကနေရွေ့သွားပြီးတော့ လိမ်သွားနိုင်ပါတယ်။
2. ပေါက်ထွက်ခြင်း - ပေါက်ထွက်သွားရင် ပြင်းထန်စွာဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ သွေးယိုစီးခြင်းတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆရာဝန်က စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ရေအိတ်ရှိတယ်လို့သံသယရှိရင် အောက်ပါအချက်တွေကို စမ်းစစ်ပြီး ရောဂါဖော်ထုတ်ပါလိမ့်မယ်။
အရွယ်အစား - ဘယ်လောက်ကြီးလဲ
ပါဝင်မှု - အရည်၊ အစိုင်အခဲ၊ အရော? အရည်တွေပဲပါရင် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေနည်းပါတယ်။ အစိုင်အခဲ (သို့) အရောဆိုရင်တော့ ကင်ဆာဟုတ်မဟုတ်ထပ်ပြီး စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ရှိ/မရှိစစ်ဆေးခြင်း - ကိုယ်ဝန်ရှိ/မရှိဆီးစစ်ကြည့်လို့ ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်လို့ထွက်ရင် Corpus luteum cyst ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Pelvic ultrasound - မိန်းမကိုယ်ကို အာထရာဆောင်းရိုက်ကြည့်ပြီး သားအိမ်၊ သားဥအိမ်တွေကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ရေအိတ်ရှိ/မရှိ၊ ရေအိတ်ရှိပါက နေရာ၊ ပါဝင်မှုတွေကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Laparoscopy - ဝမ်းဗိုက်တွင် အပေါက်သေးသေးလေးဖောက်ပြီး မှန်ပြောင်းထည့်ကာ သားဥအိမ်တွေကိုကြည့်နိုင်သလို ရေအိတ်ကိုလည်း ထုတ်နိုင်ပါတယ်။
CA 125 blood test - သွေးတွင်းရှိ ကင်ဆာကိုညွှန်ပြတဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ CA 125 ပမာဏကို တိုင်းတာနိ်ုင်ပါတယ်။ ကင်ဆာရောဂါများတွင် CA 125 ပမာဏမြင့်တက်လေ့ရှိသော်လည်း အချို့သောရောဂါများတွင် ကင်ဆာမဟုတ်သော်လည်း CA125 များနေတတ်ပါတယ်။
လူနာရဲ့ အသက်၊ ရေအိတ်အရွယ်အစား၊ ရောဂါလက္ခဏာတွေအပေါ်မူတည်ပြီး ကုထုံးအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
စောင့်ကြည့်ခြင်း - အများအားဖြင့် ရေအိတ်သူ့အလိုလိုပျောက်သွားမှုရှိမရှိ လအနည်းငယ်စောင့်ကြည့်ပြီးမှ ပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်အသက်အရွယ်မဆို ရောဂါလက္ခဏာလည်းမပြ အာထရာဆောင်း(Ultrasound)မှာလည်း ရေအိတ်သေးသေးပဲဆိုရင် စောင့်ကြည့်ဖို့ညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။
သန္ဓေတားဆေးများ - နောက်ထပ် ရာသီလာတဲ့အခါမှာ ရေအိတ်တွေထပ်မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့အတွက် သန္ဓေတားဆေးသောက်ဖို့ညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။ သန္ဓေတားဆေးတွေက သားဥအိမ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေကိုလည်း လျော့ကျစေပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှု - ရေအိတ်အရွယ်အစားကြီးပြီး functional cyst မဟုတ်ဘဲ အရွယ်ကဆက်ပြီးကြီးနေမယ် (သို့) ရာသီ 2-3 ခါလောက်လာပြီးတဲ့အထိ ဆက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ ခွဲစိတ်ပြီးထုတ်ပစ်ဖို့ညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။
ကာကွယ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်း တိတိကျကျမရှိပေမယ့် ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ရောဂါ ကိုစောစောသိနိုင်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ ဓမ္မတာလာချိန် အပြောင်းအလဲတွေကို သတိထားကြည့်ပါ။ ရာသီလာချိန်တွင်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထမရှိသော လက္ခဏာများခံစားရပြီး လအတန်ကြာခံစားရခြင်းတွေကို သတိထားမိရင် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။